Hindusam - Wikipedia
Boga "Hinduu" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Deenka- Asia Hinduuga (; waa mid ka mid ah diimaha ugu weyn ee aduunka lagaga dhaqmo taasi oo inta ugu badan laga helo qaarada Aasiya, gaar ahaan dalka Hindiya iyo nawaaxigeeda.
Astaanta diinta hinduusamka
Hinduistu waa diinta Hindida iyo dharma, ama hab nololeed, [Note 1] oo si ballaaran loogu dhaqmo gudaha Hindiya. Hinduism waxaa loogu yeeraa diinta ugu da'da weyn caalamka, iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo culimada waxay tixraacayaan sida Sanātana Dharma, "dhaqanka daa'imka ah", ama "jid weligeed ah", oo ka baxsan taariikhda aadanaha Aqoonyahanadu waxay tixgeliyaan Hinduistu sida Fusion ama qoris ee dhaqamada iyo dhaqamada kala duwan ee Hindiya, oo leh xididooyin kala duwan [note 6] iyo aasaasaha ma jiro Hindisahan Hindu "Hindu" wuxuu bilaabay inuu horumariyo inta u dhexaysa 500 BCE iyo 300 CE, kadib xilligii Vedic (1500 BCE ilaa 500 BCE).
Inkasta oo Hinduistu ay ka kooban tahay falsafooyin balaadhan, waxay ku xiran tahay fikradaha la wadaago, cibaadada la aqoonsan yahay, cosmology, khayraadka qoraalka wadaagga ah, iyo xajinta goobaha muqaalka ah. Qoraallada Hindu waxaa lagu qeexay Śruti ("maqal") iyo Smullti ("xusuusiyay"). Qoraalladaasi waxay ka hadlaan fiqiga, falsafada, dabeecadda, Vedic Yangna, Yoga, caado dhaqameedka, iyo dhisidda macbadka, mawduucyo kale. Qorniinka waaweyn waxaa ka mid ah Vedas iyo Upanishads, Bhagavad Gita, iyo Agamas. Ilaha awoodda iyo xaqiiqooyinka weligeed ah ee qoraalladiisa waxay leeyihiin door muhiim ah, laakiin sidoo kale waxaa jira dhaqan adag oo Hindu ah oo su'aalo waydiinaya awoodda si loo xoojiyo fahamka xaqiiqooyinkaas iyo horumarinta dhaqanka.
Mawduucyada muhiimka ah ee aaminsan Hindu-yada waxaa ka mid ah afarta qaybood, ujeedooyinka habboon ama ujeedooyinka nolosha aadanaha, kuwaas oo ah DHARMA (anshaxa / waajibaadka), Artha (barwaaqo / shaqo), Kama (rabitaan / xishood) iyo Moksha (xoriyad / xorriyad / badbaadin); Karma (ficil, ujeedo iyo cawaaqib), Saadaasha (wareegga dhalashada), iyo Yesas kala duwan (wadooyinka ama dhaqamada si moksha loo helo) Hababka Hindu waxaa ka mid ah dhaqanno sida cibaadada (cibaadada) iyo akhrinta, fekerka, dabeecadaha qoysaska ku salaysan ee marinka, xafladaha sannadlaha ah, iyo xajmiga mararka qaarkood. Qaar ka mid ah Hindiyuhu waxay ka tagaan adduunkooda iyo hantidooda, ka dibna waxay ku hawlan yihiin Sannyasa nololeed (dabeecado waaweyn) si ay u gaaraan Moksha. Hinduismku wuxuu qeexayaa waajibaadyada weligeed ah, sida daacadnimada, ka ilaalinta dhaawaca noolaha (ahimsa), dulqaadka, dulqaadka, is-xakamaynta, iyo naxariista, iyo kuwa kale. Afarta deenish ee ugu weyn ee Hinduistu waa Vaishnavism, Shilinimada, Shakismiga iyo Smartism.
Waddnmaha Daadka HinduEdit
United Arab Emirates 100,000+
United States 500,000+
United Kingdom 500,000+
Hinduistu waa diinta saddexaad ee adduunka ugu weyn; Dadka Hindida ah, oo loo yaqaan Hindus, waxay ka kooban yihiin 1.15 bilyan, ama 15-16% dadweynaha adduunka. Hindus waxay ka kooban yihiin inta badan dadka Hindiya, Nepal iyo Mauritius. Jaaliyado Muhiim ah Hindu ayaa sidoo kale laga helaa Kariibiyaanka, Afrika, Waqooyiga Ameerika, iyo waddamo kale.
deenka bilab asia
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hindusam&oldid=231764"
Last edited on 1 Maarso 2022, at 13:15
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Maarso 2022, marka ee eheed 13:15.